Nhau - Hangzhou Jiande Enterprise yakakurumidza kudana vashandi vanopfuura zana
Hangzhou Jiande Enterprise yakakurumidza kudana vashandi vanopfuura zana
Hangzhou Jiande Enterprise yakakurumidza kudana vashandi vanopfuura zana, uye yakapetwa katatu mubhadharo wavo kukurudzira nguva yekuita masiki!
Nekuputika kweiyo nyowani coronavirus pneumonia muWuhan, kugadzirwa uye kupihwa mamask kwave musoro wenyaya yeruzhinji.
Seyinotungamira bhizinesi muR & D uye kugadzirwa kwekufema yekudzivirira michina ine epamba musika mugove we35%, Jiande Chaomei Mazuva ese Chemical Co, Ltd. yakakurumidza kupindura kune inowanda musika kudiwa kubva kune inopenga nyowani coronavirus pneumonia denda uye pakarepo yakadaidza vashandi vadzoka kufekitori kuronga Munguva yeChinese Idzva Idzva, hafu chete yezuva iri kure paEvha Idzva Idzva, uye imwe nguva yese inosimbiswa zvizere kugadzirwa.
Pakutanga, vanopfuura vashandi zana nemakumi maviri vakanga vadzokera kumba kubva kuzororo musi waNdira 18, mushure mekugamuchira ziviso yeawa, vakaisa parutivi basa ravo kumba, vakangodzokera kumabasa avo, uye vakazvipira kubasa rekusimbisa kuwanikwa kwemasiki.
Musangano wekugadzira waive wakazara, uye vashandi vakagara padhesiki rekuvhiya vachitya kumhanyisa kugadzira masiki. Mushure mekunge vashandi vapedza iyo Ultrasonic Welding yeinodzivirira mask, mumwe munhu akabva aburitsa mask kunze.
“Nhasi, huwandu hwese hwemaodha mufekitori hwasvika pamamiriyoni anodarika makumi masere, uye zvinhu zvakamiswa. Tiine katatu mubhadharo, tichasheedza vese vashandi vakatenderedza vanogona kufonerwa uye edza nepatinogona napo kuti tizvipedze. Mahodha, iyo yaimbove fekitori mutengo wemasikisi unoramba wakangofanana. ” Lin Yanfeng, maneja mukuru webato rePati reNorth Korea uye masks eUnited States muJiande City, akati isu tiri chikamu chenyika chekuchengetedza zvimbichimbi, uye zvido zvenyika zvinofanirwa kutanga.
Chaomei Kambani yakamboita mabasa akakosha enyika panguva yeSARS, ichipa masks-proof eSB Beijing Xiaotangshan Hospital, Ditan Hospital, Beijing Infectious Disease Hospital, General Logistics department reChinese People's Liberation Army uye Emergency Material Reserve Center.
Sekureva kwemishumo, zvinotarisirwa kuti kubva muna Ndira 22 kusvika pazuva rechina reLunar New Year, kambani inovimbisa kugadzirwa kwezuva nezuva kwemasiki makumi matatu, makumi mashanu ezuva nezuva kugadzirwa kubva pazuva rechina kusvika kune rechisere, uye anopfuura zviuru zana zvemazana zvigadzirwa mushure me zuva rechisere.